Lixabiso Professional isichumiso Urea granules isityumzi Machine Suppliers kunye Factory | YiZheng
Inkqubo ye- Isichumiso seUrea Granules Crusher Machine luhlobo lomatshini isityumzi adjustable ngaphandle ilaphu screen eyenzelwe ngokusekelwe ukufunxa phambili ocoliweyo izixhobo otyumkileyo basekhaya nakwamanye amazwe. Sesinye sezixhobo ezinokusetyenziswa ngokubanzi kwisichumiso sokutyunyuzwa kwaye siyimveliso yelungelo elilodwa lomenzi wenkampani yethu.
Yintoni umatshini wesichumiso seUrea Crusher?
1. Isichumisi Urea Crusher Machine ikakhulu isebenzisa besila kunye ukusika umsantsa phakathi mqengqeleki kunye plate concave.
2. Ubungakanani kugqitywe limisela iqondo lokutyunyuzwa kwezinto, kwaye isantya sedrum kunye nobubanzi bunokuhlengahlengiswa.
3. Xa i-urea ingena emzimbeni, ibetha eludongeni lomzimba kwaye idide kwaye yaphuke. Emva koko ityunyuzwa ibe ngumgubo ngokusebenzisa i-rack phakathi kwe-roller kunye neplate ye-concave.
4. Ukucocwa kwepleyiti ye-concave kuya kulungelelaniswa ukuya kwinqanaba lokutyunyuzwa ngendlela elawulayo ngaphakathi kwe-3-12 mm, kwaye umlawuli wezibuko lokondla unokulawula ivolumu yemveliso.
Ngaphambi kokusetyenziswa, beka ifayile ye- Isichumisi Urea Crusher Machine kwindawo ethile kumasifundisane kwaye uyixhume kumthombo wamandla oza kuyisebenzisa. Ukucola kokucola kulawulwa kukushiya izithuba ezimbini. Isithuba esincinci, ukucocwa kokucoleka, kunye nokuncitshiswa kwesihlobo kwimveliso. Eyona nto ibhetele umphumo wokutsalwa kwe-pulverization, kukuphakama kwesiphumo. Isixhobo sinokuyilwa ukuba siselfowuni ngokweemfuno zomsebenzisi, kwaye umsebenzisi angahambisa indawo ehambelanayo xa uyisebenzisa, efanelekileyo kakhulu.
Iimpawu Umatshini isichumiso Urea isityumzi
1. Ngokukodwa izinto eziphezulu zokufuma, inesicelo esomeleleyo kwaye akukho lula ukuyivimba, kwaye ukukhutshwa kwezinto kulunge.
2. blade Ukutyunyuzwa yamkela izinto ezizodwa, kwaye ubomi benkonzo amaxesha amaxesha amathathu kunomnye umatshini isityumzi.
3. Inokuchaneka kokusebenza okuphezulu; Ukuxhotyiswa ngefestile yokujonga kwenza ukuba iindawo ezinxibayo zigqibe ukutshintshwa kwimizuzu eli-10.
Q1: Yintoni i-Advantage ye Urea Compound isichumiso isityumzi Machine?
I-A1: Isiqinisekiso sonyaka omnye, sinobomi obude benkonzo ekusebenzeni kwencwadana yethu yesikhokelo.
I-Q2: Ungayibeka njani iodolo yeUrea Compound Isichumisi?
I-A2: Ungayi-odola ngokuthe ngqo kwi-Intanethi ngeSiqinisekiso soRhwebo, siya kufumana iodolo yakho kwaye sikuphendule kwangoko; Emva kokuba uqinisekise umatshini ofanelekileyo kwaye usifaka nge-Assurance Trade, siya kulungiselela imithwalo kwangexesha.
Q3: Ngaba uyayamkela ii-odolo ezikhethekileyo ze-OEM ze-Urea Compound Fertilizer Crusher?
I-A3: I-odolo ekhethekileyo ye-OEM ikwafumaneka kuba sinemveliso yethu, eyimveliso ekhokelayo kule ndima inamava engama-20.
Q4: Leliphi ixesha lokuhambisa lokwenyani lomzi mveliso wakho?
I-A4: iintsuku ezi-5 ukuya kwezi-7 zeemveliso zoluhlu ngokubanzi, okwangoku, iimveliso zeebhetshi kunye neemveliso ezizilungeleyo ziya kufuna iintsuku ezingama-30 ukuya kwiintsuku ezingama-60 ngokusekwe kwiimeko ezahlukeneyo.
I-Q5: Uqinisekisa njani ukuba umgangatho we-Urea Compound Isichumisi se-Urea?
I-A5: Ngokubanzi, izixhobo zethu zezona ziluhlobo olomeleleyo kubathengi bethu ekhaya okanye phesheya. Kunye neqela lethu elinamava lolawulo lomgangatho, sizama ukukunikezela ngemveliso esemgangathweni ophezulu. Nangona kunjalo, siyaqonda ukuba kukho inani elincinci lemveliso elinokuthi liphosakele okanye lonakaliswe ngezizathu ezahlukeneyo.
Q6: ingaba inkonzo yakho emva-kwentengiso? yonakala?
I-A6: Ngexesha lokuqinisekisa iinyanga ezingama-24, inkonzo yethu emva kokuthengisa iyatshintsha iindawo ezonakeleyo, kodwa ukuba umonakalo unokulungiswa ngexabiso elincinci, siya kulinda ityala lomthengi malunga neendleko zokulungisa kunye nokubuyisela le nxalenye yeendleko. (Qaphela: iinxalenye zokunxiba azibandakanyi.)
Wamkelekile kuphando lwakho kwaye undwendwele umzi-mveliso wethu!
Isichumiso seUrea Crusher Machine Umboniso weVidiyo
Isichumiso Urea Crusher Machine Ipharamitha
Umgama Ophakathi (mm)
Ukutshabalalisa iGranularity (mm)
Amandla oMbane (kW)
Egqithileyo Double-asi Chain isityumzi Machine isichumiso isityumzi
Okulandelayo: Umatshini wokuchumisa umatshini weCage Mill
Uhlobo olutsha Organic & Compound isichumiso Gra ...
Intshayelelo Luluphi uhlobo olutsha loMatshini we-Organic & Compound Fertilizer Granulator? Uhlobo olutsha lwe-Organic kunye ne-Compound Fertilizer Granulator Machine isebenzisa amandla e-aerodynamic aveliswe ngumkhosi ojikelezayo ojikelezayo ohamba ngesilinda ukwenza izinto ezifanelekileyo zixubeke ngokuqhubekayo, i-granulation, spheroidization, ...
Intshayelelo Yeyiphi iFlat Die Fertilizer Extrusion Granulator? Umatshini wokucoca ulwelo weFlat die Extrusion Granulator uyilelwe udidi olwahlukileyo kunye nochungechunge. Umatshini wokufa osisicaba usebenzisa ifom yokuhambisa isikhokelo ethe ngqo, eyenza ukuba i-roller izijikeleze phantsi kwesenzo samandla okuxubana. Izinto zomgubo ...